Madaxweyne Gaas ma ka dhabeyn doonaa in “Puntland kuwii aqoonta lahaa ka soo tageen … qofkii baxsan karay soo baxsaday … oo ay isugu hareen intii aan aqoonta lahayn.” – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas ma ka dhabeyn doonaa in “Puntland kuwii aqoonta lahaa ka soo tageen … qofkii baxsan karay soo baxsaday … oo ay isugu hareen intii aan aqoonta lahayn.”
Janaayo 8, 2019 2:30 b 0
Maanta waxa ay ahayd maalin musharrixiinta u hanweyn xilka Madaxweyne Puntland 2019 ay shacabka Puntland iyo Wakiiladooda la qaybsadaan qofka ay yihiin, waxa ay aaminsanyihiin, waxa ay soo qabteen iyo waxa ay qaban doonaan.
Berri waa doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka Puntland.
Shalay iyo shantii sano ee la soo dhaafay waxa ay ahaayeen waqti lagu kala barto musharrixiinta maanta, ha ahaato Madaxweyne Gaas oo 5 sano si fiican loo bartay, ama musharrixiinta kale ee ayana u hanweyn in 5 sano oo kale ayana la tijaabiyo.
Musharrixiintii maanta waxa ay isugu jireen labo qolo, haba kala badnaadeen e:
Musharrixiin codkar ah, ku kalsoon qof ahaantooda iyo siyaasaddoodaba, ka sheekeeyey waxa ay soo mareen, oo haddana si toos ah u qeexay meesha ay Puntland berri la rabaan, kuna sheegay waqti cayiman, iyo
Musharrixiin hadalkiiba kari waayey, kuwo waqtigii mareyn kari waayey, iyo kuwo af Soomaaligii iyo Ingiriiskaba kala saari waayey
Labadaas qolo Madaxweynaha Puntland ee laga soo dhex saari doonaa waa hawl u taal xubnaha Golaha Wakiilada Puntland.
Inta kore u qaado hordhac maanta iyo giraanta doorashada Puntland, laakiin hadafka qoraalkani waa mid diiradda saaraya khudbaddii Madaxweyne Gaas ee maanta 7 Janaayo 2019, iyo tiisii 5 sano kahor ee 7 Janaayo 2014.
Alla maalmuhu isku ekaa haddana kala duwanaa
Janaayo 2014 Madaxweyne Gaas oo ku rajo weyn in la doorto waxa uu Golaha Wakiilada Puntland la qaybsaday khudbad si toos ah u taabatay xaalka Puntland ee maalintaas.
Musharrax Gaas waxa uu Janaayo 2014 Golihii Wakiilada Puntland ka hor yiri ereyada soo socda: “Puntland kama jirto dowladnimo taabaqaaday; Puntland kama jirto dowlad u danqata dadkeeda; Puntland kama jirto dowlad u adeegta dadkeeda … kama jirto dowlad daboosha baahida dadkeeda. Puntland kama jirto dowlad ku shaqaysa rabitaanka dadkeeda. Puntland kama jirto dowlad dhista maamul baahsan oo wada gaara dhulkeeda. Sidaas darteed Puntland uma baahna laba arrimood midna. Meesha ay Puntand taal cidiid dhigtay uma baahna in aan doorano. Waddadii aan soo marnay in aan dib u raacnana uma baahna Puntland, waayo taasi waxba ma baddalayso. Haddii aad rabtaan in shanta shano ee soo socotaa ay u eekato shantii sano ee la soo dhaafay dabcan waad garaneysaan cidda aad dooraneysaan.”
Alla maalmuhu isku ekaa, haddana kala duwanaa.
Abaarta maanta Puntland ka jirtaa haba ka liidato tii 5 sano kahor, laakiin siyaasaddii bisha Janaayo 2014 u ekaa middan maanta ee Janaayo 2019. Tilmaamihii Puntland ee Madaxweyne Gaas ee bishii Janaayo 2014 ayana u ekaa xaqiiqada maanta ee Puntland.
Ereyada kore ee Musharrax Gaas ee 7 Janaayo 2014, ee musharruxu u jeediyey reer Puntland ahaana “haddii aad rabtaan in shanta sano ee soo socotaa ay u eekato shantii sano ee la soo dhaafay dabcan waad garaneysaan cidda aad dooraneysaan,” maanta waa hubaal in dhawaaqooda ay ku jiriiricoodeen dhegaystayaasha Daljir, waana hubaal in golahooda Wakiilada Puntland ee dooran doona Madaxweynaha Puntland shanta sano ee soo socota aysan ayana moogganeyn xaqiiqda maanta ee Puntland iyo teedii shantii sano ee la soo dhaafay.
Laakiin inta mar kale aynaan dhegaystaha Radio Daljir iyo xubnaha Golaha Wakiilada Puntland xasuusin khudbaddii Madaxweyne Gaas ee maanta 7 Janaayo 2019, iyo sida aysan ugu ekayn tiisii shan sano kahor ee 7 Jan 2014, Madaxweyne Gaas-na uu kala maan iyo kala xasuus yahay, aan marka hore idin xasuusinno khudbaddii Gaas ee bishii Luulyo 2016 asaga oo safarro ku maraya Waqooyiga Ameerika.
Madaxweyne Gaas wixii uu Toronto ka yiri 2016 shaki kuma jiro in uu maanta aaminsanyahay, waxa uuna yiri, “Puntland waa laga soo tagay. Kuwii aqoonta lahaa waa soo tageen. kuwii dhaqaalaha haystay waa soo tageen. Qofkii baxsan karay waa soo baxsaday. Waxaa isugu haray intii fakhriga ahayd. Intii aan waxba haysan. Intii aan aqoonta lahayn.” Madaxweyne Gaas waxa uu reer Puntland iyo Soomaali oo dhan u sheegay in Puntland lagu kala tagay oo aysan cidi ku harin.
Shaki kuma jiro in Madaxweyne Gaas uu maantana aaminsanyahay in inta Puntland “isugu haray” ay yihiin jaahiliin wixii la rabo loo sheegi karo, wax kastana laga ballanqaadi karo, oo Puntland aysan ka duwaneyn xabsi laga soo fakaday oo “qofkii baxsan karay waa soo baxsaday,” inta hartayna sida xoolihii loo dareersan karo.
Intaas kaliya ma aha iyo in Gaas uu Puntland iyo dadkeeda liiday, kana soo qaaday dad aan jirin, haddana khudabaddiisaas Toronto iyo dhammaan khudbadihii Gaas ee Waqooyiga Ameerika waxa ay daarnaayeen ballanqaadkiisii “diidmada hab-qaybsiga 4.5” iyo ballanqaadkii kale ee “qof iyo cod in sannadka 2019 loo dareeri doono.”
Ballanqaadyo aan midi ka rumoobin ayey ballanqaadyadaas dhammaantood noqdeen iyo dhaawac qoyan, aan weli buskoon, oo haddana maalin walba cusbo lagu firdhiyo.
Dhaawac qoyan kaliya ma aha e Madaxweyne Gaas waxa uu reer Puntland yar iyo waayeelba ula dhaqmay sidii dad liita, dad wixii la rabo loo sheego, oo sidii la rabo loola dhaqmo, ahna dad wakiil iyo waayeel aan kala garan karin ballan iyo ballan-darro, maamul iyo musuq.
Maanta iyo Madaxweyne Gaas
Aan maanta iyo Gaas mar kale u soo laabano. In kasta oo kalsoonida Gaas ee maanta ay wax badan ka liidatay tiisii 7 Janaayo 2014, oo sidii uu hadalka waayo u heli jiray uusan maanta u helin, oo uu haddana hadalka wax badan calaliyey, laakiin dulucda khudbaddiisii maanta waa ay ka marnayd soohadalqaad ammaanka Puntland, baahin maamul, iyo ku shaqayn rabitaanka shacabka Puntland.
Meesha khudbaddii Gaas ee maanta ay inta kore ka marnayd, waxa uu Madaxweyne Gaas xoogga saaray sida uu u yahay “Madaxweyne xogogaal ah, xogogaal u ah isbaddalka siyaasadeed ee gobolka, loo baahanyahay maalingalin, loona istaago difaaca Puntland.”
Meesha uu Gaas 5 sano kahor muujiyey in qof 5 sano wixii lagu bartay loo jeedo, yaan 5 sano oo kale lagu aaminin, maanta Madaxweyne Gaas AAMINAAD marna ma uu soohadalqaadin oo waxa uu booskeedii ku badalay, “Puntland looma dhiibi karo qof aan ogeyn, kuna filneyn culayska jira, waana sababta jiilka cusub ee xildhibaanada ahi … ay ku tahay masuuliyad in ay si adag uga fiirsadaan cidda ay dooranayaan.”
Madaxweyne Gaas shacabka Puntland iyo Wakiilada shacabka uma uu qeexin, umana uu faahfaahin waxa uu yahay “culeyska jira” iyo cidda abuurtay iyo sida loo daweyn karo culeyskaas ama culeysyadaas.
Dhanka ammaanka Puntland iyo sugidda xuduuduhu, hadalka maanta ee Madaxweyne Gaas waxa uu ahaa lama filaan, aan marna laga filan karin Madaxweyne Puntland. Gaas oo dhibka ammaandarro ee Puntland maanta ka jira cududaar uga dhigaya “duruufo” dhaqaale xumi, laakiin haddana ammaanaya heerka ammaan ee Puntland waxa uu khudbaddiisa ku yiri, “… haddana maanta waxaa Ilaahay mahaddiis ah in aysan ina ilaalineyn ciidamo ajnabi ah.”
20 sano aasaaskii Puntland kabacdi, dowlad federaal ah dhibdideedii kabacdi, dhiiggii reer Puntland u hureen midnimada iyo qaranimada Soomaaliya kabacadi, waxaa nasiibdarro ah in Madaxweyne Gaas uu maanta khudbaddiisa waxqabad ee shantii sano ee la soo dhaafay uu ku daro in AMISOM aysan Puntland joogin. Waxaa nasiibdarro ah in uu uu Madaxweyne Gaas mar kale isku dayo in uu marinhabaabiyo shacabka Puntland. Waxaa nasiibdarro ah in Puntland oo Madaxweyne Gaas uu ugu yimid ciidan booliis oo tayo leh ay maanta Puntland oo dhan ka marantahay ciidan booliis. Waxaa nasiibdarro ah in Madaxweyne Gaas oo Puntland ugu yimid ciidan daraawiish oo tayo leh, uu maanta 5 sano kabacdi Golaha Wakiilada Puntland hortooda ka yiraahdo, “si loo helo ciidan tayo leh waxaan dib-u-habeynayaa ciidamada Puntland, waxaana isku dhafayaa ciidamadaas iyo ciidan beeleedka Puntland.”
Waxaa nasiibdarro mug weyn ah in Ciidamada Ammaanka Puntland ee loo yaqaan Puntland Security Force (PSF) oo ay miisaniyadooda bixiso dowladda Mareynkanku loona dhidbay in ay ilaaliyaan ammaanka Puntland ay maanta tayo beeleen, magaaladadii Bossaso ee ganacsi ee Puntland-na ay maanta la ciireyso al-Shabaab iyo Daacish.
Ma naqaan “duruufaha dhaqaale” ee maanta haysan kara ciidamada PSF-ta. Laakiin waxaa cad in ay haystaan duruufo musuqmaasuq. Waxaa cad in ay jiraan duruufo cad oo is-hortaagay in la helo wadashaqayn shacab iyo mid ciidamada ammaanka. Waxaa cad in aysan jirin duruufo dhaqaale ee ay jiraan duruufo maamul xumo, oo ay sii xumeeyeen duruufo musuq.
Intaas kore haddii aysan weli ku deeqin waxaa hubaal tan sugidda xuduudaha Puntland ee Madaxweyne Gaas ee shantii sano ee la soo dhaafay iyo “isku-deygiisii” xoreynta gobolka Sool in aysan ku deeqin doonin, si lamid ah sida aysan kuu deeqi doonin in Madaxweyne Gaas uu mar hore ku dhaqaaqay “hannaanka asxaabta badan iyo helida hannaanka hal qof iyo hal cod” iyo sida uu u magacaabay “Guddigii Doorashada 2024 iyo hawlahaas ka shaqeeya.”
Mala-awaalka Madaxweyne Gaas
Madaxweyne Gaas miyuu weli mala-awaalayaa in shacabka Puntland iyo Wakiiladoodu ay yihiin “jaahiliin” aan wax akhrin, xasuus laheyn, kala aqoon xukun, dadnimo, dowladnimo, ammaan, ammaandarro, AMISOM iyo Daraawiish, musuq iyo xisaabtan, iyo hankooda iyo himilada ay hiigsanayaan?
War yeynaan idin ku daalin, laakiin xaalka siyaasadeed ee Madaxweyne Gaas iyo maanta waxaa fasiraad ugu filan nus daqiiqadii ugu danbeysay ee khudbaddiisa markii gambaleelku ku yeeray asaga oo aan khudbadda dhammaysan, uuna damcay in uu sii wato khudbadda, laakiin Guddoonku ka daba yiri, “Mudane Madaxweyne, waa dhamaaday taymkii, waana mahadsantahay.”
Mudane Madaxweyne mahadsanid!
Hoos kaga bogo khudbadda maanta ee Madaxweyne Gaas ahna musharrax xilka Madaxweyne Puntland 2019.
Diiwaanka Daljir PUNTLAND
Maxaa sababay in Abwaan Cabdirashiid uu helo 5 cod oo kaliya? (dhegayso | daawo)
Abwaan Cabdirashid oo maray jidkii Faarax Cabduqaadir iyo Gaas oo wada abaabul horleh
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 16913
Sawirada: Baarlamaanka Puntland oo dooranaya madaxwayne iyo madaxwayne kuxigeen